Amafoni isizukulwane wokugcina HTC Steel Inkampani lulonke lusesimweni ngempela umbusi yimpumelelo, futhi nakuba idivayisi akucindezelwe ngokuqinile phezu yesikhulumi, "Samsung", izilinganiso ezinhle, yokuthengisa, kanti bathanda abalandeli luye lwabonisa ukuthi sha ngeke give up bese wenza umzamo omkhulu ukuze uphume esimweni esinzima, ulwela ukubuyekeza omuhle.
HTC One M8 angase ukubonisa kangakanani isethi inkampani Taiwanese - yidivayisi izinga, ngokulinganisela olinganiselayo, ehambisana kahle futhi ngokushesha impela.
Ngokuya imodeli design M8 into efana esasisandulele M7. Yize zombili onobuhle bheka zicishe, umehluko okukhulu ephawuleka ngemva kokubili kumadivayisi Usuvakashele ezandleni zakho. Umehluko omkhulu phakathi emgqeni wokugcina okwamanje - kuba ubuqotho umzimba, futhi uma i-M7 ebiyelwe is eyenziwe aluminium, futhi ofana umklami ababeka ndawonye bevela ezingxenyeni eziningana, entsha HTC One M8 phone kubonakala Monolithic kanye ezisindayo-duty.
Lo mphumela yafinyelelwa ngokusebenzisa ukuqedwa imodeli entsha ifaka plastic - bona kuyabonakala kuphela ezindaweni antenna kanye bonke. izici ezivamile smartphone babe oyindilinga xaxa futhi abushelelezi, ngenxa yale divayisi ngokuphelele uhlangothi, nakuba Ubukhulu yanda, futhi isiqinisekiso lokhu - akekho ezisele zokubuyekeza.
HTC One M8 itholakala amabanga umbala ezintathu: segolide, ukukhanya grey-isiliva umpofu omnyama. Gamma ifaniswe kahle kakhulu, futhi smartphone kahle nganoma iyiphi indlela akubukeki igajethi kuyisicefe noma zomile, futhi umzimba esenziwa ukukhethwa efanele umthunzi abathandekayo zasebukhosini.
Cishe wonke Corpus eqoqwe kobuchwepheshe unibody (akukho izakhi esikhiphekayo), ngaphandle emathileyi ngaphansi sim kanye ikhadi le-SD, ngakho imodeli muhle kakhulu ngokuya quality Yakha, igcizelela ngokoqobo zonke isibuyekezo.
HTC One M8 creaking bancishwa noma izingxenye ukucathula, awusebenzi thola backlash noma izikhala, ngoba smart phone ifana ibha metal, obuphathekayo kumniniyo. Okuwukuphela Ububi lolu hlobo izakhiwo - maintainability, kodwa lokho omunye indaba.
Model M8 ifakwe ezinhlanu intshi Super LCD3 isibonisi isinqumo 1920 by 1080 Amaphikseli e-FullHD shanela nge ichashaza ukuminyana 441 ppi, ku screen efanayo kwaba ifakwe igajethi M7 esidlule. Ngo HTC One M8 Ukubuyekeza sesikrini Ubuningi bamahora efakwe: nganoma yimuphi engela wena uyibambe noma, isithombe ngeke ukufiphala noma ukuphazamiseka.
Idivayisi ine supply efanele ukukhanya, ngakho ukusebenza uma libalele ngaphandle kwezinkinga. Khombisa umbala ukukhiqizwa kabusha eduze yemvelo, kanye nemibala bheka namanzi futhi ngokulinganisela ocebile, ngaphandle asidi nekuphikisana ngokweqile.
Ukulungiswa Automatic isibonisi usebenza ngendlela efanele ezimweni eziningi, ngakho-ke isifiso ukulungisa izilungiselelo screen ngesandla asivelanga. Ngenxa ukulungiswa okuzenzakalelayo, ungakwazi ukukhohlwa ngokuphelele mayelana kokungenela we umsebenzisi kuzilungiselelo, futhi kujabulisa, ikakhulu ngoba isici enjalo yocingo kuthola ukubuyekezwa omuhle.
HTC One M8 eseke abanye umehluko kusuka isihumusho isibonisi-M7. Imodeli entsha isekela touch lokuloba, ine impendulo ngcono uthinte ngeminwe ezimanzi futhi ivumele umsebenzisi isebenze isikrini amagilavu on.
Thanda isizukulwane esedlule, imodeli entsha ifakwe ngekhamera 4 MP. Eqinisweni, HTC One M8 ikhamera lihlukaniswe kunjengokungathi zibe izingxenye ezimbili - zamabanga aphansi naphezulu. Okokuqala (UltraPixel) ine beso f / 2.0 kanye ne-lens 28 milimitha kanti eyesibili iqoqa ulwazi mayelana yesehlakalo ukujula, futhi iphuzu focus. Zonke ndawonye ibizwa ngokuthi HTC Duo Ikhamera linikeza umnikazi eziningi izici ezintsha kanye nezici ehlukile uma usebenza ngezithombe.
Ikhamera has anhlobonhlobo zimo ezikuvumela kahle zifezeke yesehlakalo ukujula, ukushintsha focus kwimodi okuzenzakalelayo futhi mathupha, ukufiphaza izinto, kusale kuphela into sokudubula, ukusebenzisa imiphumela izithombe noma ivolumu isithombe.
Isiqophi ukuqopha kusuka ikhamera, ungabhala ngokulungiswa esiphezulu 1920 by 1080 Amaphikseli. Isilinganiso bhala ngesivinini-30 ngesekhondi ngesilinganiso kancane Mbps 20. I-track umsindo okulotshwe izinga stereo ngesilinganiso esingu-190 Kbps, okuyinto kuhle ngenxa HTC One M8.
Uhlolojikelele kanye focus kungashintshwa kokubili ngesandla futhi ngosizo autofocus, kodwa Kulo mBhalo, esiphezulu kokukhulisa video ibonisa umsebenzi njengoba sinjalo optical, abanye bangase bangajabuli lapho bekubona. Microphone ubhekana umsebenzi phambili ngamaphuzu ayisikhombisa: akukho iphalishi umsindo nazo zonke imisindo ngempela akachazeki, okuyinto musa ukuvimbela ngisho nomoya umsindo isitimela.
HTC One M8 Umsebenzi Offline
Inani ukusebenza okuqhubekayo zedivayisi - kuba impela enamandla futhi okungezona esikhiphekayo Li-Pol ibhethri 2600 mah umthamo (cishe ngo-300 mah). imodeli Langaphambilini M7 uma udlala kwekhwalithi ephezulu yevidiyo (720 p) lakwazi ukuqhuba asuke kancane amahora angaphezu kwayisikhombisa, kuyilapho M8, nemibandela efanayo safinyelela embundwini amahora 10.
Uma sikhuluma nsuku zonke, futhi ukusetshenziswa sasivumela asebenzayo smartphone, ibhethri ihlala cishe usuku imizuzu 40-60 senkulumo isikhathi, 3-4 amahora yomculo zomsakazo, kwi-inthanethi 1-2 amahora, 20-30 esemesok futhi mail push- Imodi mail.
Smartphone ifakwe ikhono ukushintshela kwagezi Imodi, ngaleyo ndlela yokulondoloza Ingcenye eqakathekileko yomsebenzi wehlelo ibhethri, wehlise ekubonisweni kokugqama, nokususa vibration nezinye abathengi ezincane. Njengoba imodi ezibucayi inikeza anda kwagezi siqondiso futhi unqamule inzwa, izinzwa zonke izicelo - ihlale ingatholakala kuphela kungenzeka ukubiza ukwamukela / thumela i-SMS kanye e-mail iklayenti.
Kuleli qophelo imodeli M8 - inhlanganisela konke okuhle ukuthi ungenza Taiwanese inkampani HTC: kalula, ngokungafani nezinye Smartphones, idivayisi kulula futhi enembile nganoma yisiphi umsebenzisi. Yiqiniso, zikhona emgqeni we minuses futhi abanye "glitches", kodwa ngokuvamile, imodeli kwaba yimpumelelo futhi kudingeka siyinake.
Isithunzi (ngokuvumelana Izibuyekezo):
inhlangano kanye nezindlu (hhayi ezingcolile, wadweba neze, design ehlukile);
umsindo kusukela BoomSound (a ecacile, elikhulu nangokumemeza izinga ezicini zonke);
ukusebenza high (kuqhathaniswa nenkambiso ukuncintisana);
ukuzinza, nokubikezela esicelweni;
Wide ikhamera ye isinqumo eliphezulu;
ezinkampani Amatebhe HTC Dot Buka icala;
Nemibi HTC One M8:
Inani (angaphezu kuka-30 000 e-base);
phakathi kokusebenza zedivayisi kungaba evuthayo;
I ukushaja ibhethri.
Ezinye izindaba zika-imodeli M8 - ngezinga elithile smartphone yesimanje, engeke nje enze yonke imisebenzi edingekayo, kodwa futhi ukujabulisa wena nsuku zonke, kusukela iphuzu yobuhle esisebenzayo umbono. Isinqumo kuyinto wakubeka - Kunconywa ukuthenga.
"Samsung I9300 Galaxy C3": izici, izithombe
Mikhalkova Yulia: i-biography yomhlanganyeli wombukiso othi "Ural pel'menis"